अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको पानीले मेरो कपाल झर्यो : के हो सत्य ? - Cutis Care
16 Mar 2018 Cutis-care hair fall in america, hair problem in australia, hair problems, hair transplant, hairfall
गएको हप्ता हामीले ३ विदेशमा बस्ने नेपालीको कपाल प्रत्यारोपण गर्यौ । तालुपना को उपचार मा धेरै नै खर्च गरिसक्नु भएको थियो उहाँहरुले। प्रत्यारोपण अगाडी हामीले सधैझैं प्रश्न गर्यौ, ‘’कसरी झर्यो जस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई कपाल?’’ हामी विदेश जाने बित्तिकै पानी परिवर्तन भयो, त्यहाँ को पानी सारैनै अप्राकृतिक भएकोले कपाल झरेको हुनुपर्छ भन्ने उत्तर दिनुभयो उहाँहरुले। समुन्द्रको पानी प्राय कडा हुन्छ र त्यस्को प्रयोगले पहिले त कपाल कडा र सुखखा भयो । तर पछि बिस्तारै झर्दै गयो ।
के पानीले कपाल झर्छ?
पानीको खराबीले कपाल झर्न सक्दछ तर, तालुपना भने कहिले हुदैँन । खराब पानीले हानि गरेर कपाल टुक्रिन सक्छ र केहि समयको लागि झर्न पनि सक्छ. तालुपनामा टाउको पछाडी को भागमा कहिले कपाल झर्दैन । पानीले नै तालुपाना हुने भएको भए टाउको पछाडीको कपाल पनि झर्नु पर्ने थियो। कपाल झर्ने समय र विदेशिने समय उस्तै भएको हुनाले धेरैलाई पानीले कपाल झरेको जस्तो लागेको हुनसक्छ ।
किन हुन्छ तालुपना ?
तालुपना हर्मोनको कारणले हुन्छ. ५-अल्फा-रिडअकतेज (5-alpha Reductase) नामक रशायण अगाडी को कपालमा हुने भएको हुनाले टाउकोको आगाडी भागको कपाल झरेर तालुपाना हुन्छ । यो रशायण पछाडिको कपाल मा नहुने हुनाले पछाडीको कपाल कहिले झर्दैन. यो पछाडिको कपाललाई अगाडी सार्ने पद्धतीलाई नै कपाल प्रत्यारोपण भनिन्छ। प्रत्यारोपण गरेपछि फेरि कपाल झर्ने समस्या भने हुदैन।
कपाल प्रत्यारोपण धेरैनै सहज बिधी हो । नदुख्ने औषधीको प्रयोग गरेर पछाडिको कपाललाई अगाडी सारीन्छ। रोपिसकेको कपाल पहिलेजस्तै बढ्ने र काट्न मिल्ने हुन्छ । २५०० भन्दा बढी प्रत्यारोपण गरिसक्नु भएका डा. धर्मेन्द्र कर्ण भन्नुहुन्छ कपाल झर्नुले मानसिक तनाब हुन्छ । प्रत्यारोपण सहज प्रबिधि भएकोले कपाल झरेको परामर्श छालारोग विशेषज्ञ डाक्टरसँग बेलैमा गर्नु पर्छ।
तालुपनाको स्थायी समाधान कपाल प्रत्यारोपण August 4, 2018
कानमा ठुलो रिँग लगाउने फेशन- कानको लोती सिलाउनु June 4, 2018
कपाल प्रत्यारोपन पछि दश वर्ष उमेर घटेको अनुभव : पहिले अङ्कल अहिले दार्इ May 11, 2018
Why I becameadermatologist – Dr. Dharmendra Karn March 26, 2018
अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको पानीले मेरो कपाल झर्यो : के हो सत्य ? March 16, 2018
यसकारण ‘तालु खुइले’ बन्दैछन् नेपालीहरु February 2, 2018
Copyright © 2019 Cutis Care. All rights reserved.